Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Italiana Tantara momba ny fahazazan'ny zaza zaza ao Daniele Rugani miampy Untold Biography Facts
Ny lahatsoratra dia manome anao ny fitantarana feno momba an'i Daniele Rugani Childhood Tantara, Biography, Fiainam-pianakaviana, Ray aman-dreny, Fiainana, Fiainana, Fitiavana, Fiainana manokana, ary ny zava-misy malaza hafa fony izy mbola zaza hatramin'ny naha-malaza azy.
Ny Fiainan'i Daniele Rugani tamin'ny fiandohan'ny sy ny fiakarana. Credits sary: ​​Instagram sy DailyMail.
Eny, fantatry ny rehetra fa niditra tamin'ny vaovao izy noho ny antony diso- satria izy no mpilalao voalohany Serie A nanao fifanarahana tamin'ny aretina Coronavirus mahafaty izay fantatra amin'ny anarana hoe Covid-19.
Na dia izany aza, vitsy ihany no mahafantatra ny tantara feno momba ny Biolojia Daniele Rugani, indrindra fa ny fahazazany. Ankehitriny, raha tsy mila ado intsony, atombohy, aloha amin'ny latabatra atiny mialoha ny tantara manontolo.
Tantara nosoratan'i Daniele Rugani:
Rehefa manomboka izy dia nomena anarana hoe "Daje Dani". Daniele Rugani dia teraka tamin'ny andro faha-29 jolay 1994 tamin'ny reniny, Lia Rugani sy ny rainy, Ubaldo Rugani ao amin'ny tanànan'i Lucca any Italia afovoany. Tonga teto an-tany ny mpilalao baolina kitra ka zanaka faharoa an'ny zanaka roa, nateraky ny ray aman-dreniny mahafinaritra.
Anaram-pirenena Italiana no lehibe tao amin'ny Ponte a Moriano mpifanolobodirindrina ao an-tanànan'i Lucca miaraka am-pitiavana ny ray aman-dreniny sy ny zokiny lahy dia fantatra fa Simeone. Ity ambany ity ny sarin'ny iray amin'ireo ray aman-drenin'i Daniele Rugani- dia ny dadany super izay hita fa maneso azy sy ny zokiny.
Nihalehibe tao amin'ny orinasa be fitiavana sy ny ray aman-dreniny sy ny zokiolona Simeone i Daniele Rugani. Sary: Instagram.
Nihalehibe tao Ponte a Moriano, zaza tanora Rugani dia zaza salama sy mahafinaritra ary manana fahafinaretana voalohany amin'ny filalaovana baolina kitra sy tennis ka tia milasy sy milomano. Nanana raim-pianakaviana tia fanatanjahan-tena, dia mora tamin'i Daniele ny nandray anjara tamin'ireny hetsika fanatanjahantena ireny.
Fiainan-dry Daniele Rugani:
Iray amin'ireo tombontsoan'ny fanatanjahantena an'i Rugani, indrindra fa ny momba ny filalaovana tennis dia fanatanjahantena izay nataon'ny tanora niaraka tamin'ny namany vitsivitsy tamin'ny fahazazany.
Amin'ny lafiny iray, ny fitiavan'i Rugani amin'ny baolina kitra dia nanao fanatanjahan-tena mahafinaritra, raha ny marina, fanatanjahan-tena ankohonana. Fantatrao ve?… Ny ray aman-drenin'i Daniele Rugani (sary eto ambany) dia mpankafy an'i Juventus maty, tsy fivadihana izay nolovin'i Rugani.
Hihaona amin'ny ray aman-drenin'i Daniele Rugani. Sary: Instagram.
Fanabeazana sy fananganana kararin'i Daniele Rugani:
Anisan'ireo fanatanjahantena rehetra dia ny fitiavana ny baolina kitra no nanjaka. Noho izany, tsy mahagaga raha Rugani tanora tena tanora dia hanomboka mametraka ny fototry ny asany amin'ny sekolin'ny baolina kitra zazalahy eo amin'ny toerana misy azy - Atletico Lucca. Tamin'ny faha-6 taonany (ny taona 2000), dia nanao veloma farany tamin'ny klioban'ny oniversite voalohany izy mba hiatrika fanamby lehibe kokoa.
Atletico Luca izay toerana nanombohan'ny lalao nifaninana tamin'ny prodigy baolina kitra. Sary: Instagram.
Miala, i Rugani dia nanomboka ny fananganana asa mavitrika tao amin'ny rafitry ny tanora tanora an'ny klioba football. Tany izy dia nandany nandritra ny folo taona mahery tamin'ny fahaizan'ny tanora (2000-2011) tamin'ny famolavolana paikady fahaiza-manao izay ampahany amin'ny fomba filalaovany.
Tany am-piandohana tao Juventus:
Tamin'ny fotoana nahaterahan'i Rugani dia 18 taona tamin'ny taona 2012, dia nanome azy ho any Juventus i Empoli tamin'ny fifanarahana fampindramam-bola tamin'ireo roa tonta izay nitahiry ny fomba nanaovana ny prodigy miaro tena amin'ny endriny tsara indrindra ho an'ny Primavera antitra (ambany-20) ekipa tanora.
Ilay zatovolahy dia nahavita tsara amin'ny baolina kitra avaratra. Ny tena mahafaly ny fianakavian'i Daniele Rugani dia tsy nahalala fatratra tamin'ny fotoana nanampiany ny tanora Juventus nandresy an'i Coppa Italia Primavera nandritra ny vanim-potoana niorenany (2012 - 2013).
Ity sary taloha ity dia mihazona foana amin'ny andro, fa ny fahatsiarovana ny fandresena ny lohateny Coppa Italia Primavera dia mbola tavela hatrany ao an-tsain'ny mpiaro azy. Sary: Instagram.
Ny fahaizan'i Rugani tamin'ny fifaninanana dia nahatonga ny Juve hanohitra ny fifanandrinana amin'ny fiaraha-miasa amin'i Empoli ho mpiaro tena mihetsika.
Tantara momba ny fomba biography:
Rehefa notanterahina ny fepetra momba ny fifanarahana mpiara-miasa dia nalefan'i Juventus niverina tany Empoli i Rugani mialoha ny fampielezan-kevitr'i Serie B tamin'ny 2013-14, nanome azy fahafahana hanaporofoana fa mendrika ny ho tonga prospect izay azon'i Juventus tanteraka izy.
Nahita fotoana nalefa nody tany Empoli izy ary nitady mafy hampitombo izany. Sary: Instagram.
Soa ihany, nanao soa i Rugani tamin'ny nanova ny fotoana ho lasa fiovan'ny asany satria ny fandraisany anjara tamin'ny rafi-piarovan-tena nataon'i Empoli dia nahita ny famaranana ny klioba faharoa tany Serie B ary nahatratra ny fampiroboroboana otomatis ho an'i Serie A teo anilan'i Palermo izay tonga voalohany.
Mitsangàna momba ny tantaram-piainana malaza:
Rugani, tamin'ny fahavaratry ny taona 2015 dia niverina tamin'ny Juventus 2015 rehefa avy nandany vanim-potoana nahazoana traikefa zokiolona niaraka tamin'i Empoli. Izany dia nanamarika ny vanim-potoana voalohany nahalasa azy tamin'ny alàlan'ny fanampiana ny ekipa handresy ny Serie A. I Rugani koa dia lasa mpiaro fototra ho an'ny klioba indrindra taorian'io Leonardo Bonucci andao ho any Milan amin'ny taona 2017.
Haingam-pandeha haingana amin'ny fotoana hanoratana ny Biography Daniele Rugani, ilay mpiaro dia voalaza fa nahazo maso eran'izao tontolo izao TSY noho ny fahaizany miaro azy fa noho izy mpilalao voalohany tao Serie A dia nanao fifanarahana coronavirus fantatra ihany koa amin'ny hoe Covid-19.
Vokatr'izany dia teo amin'ny eritreritra sy ny vavak'ireo mpankafy ary ny mpanao gazety izay niandry tamim-paharetana ny famoahana ny vaovao hoe rehefa afaka ny viriosy izy io ary miverina any an-tsaha.
Ny areti-mifindra sy ny sioka fanamafisana avy any Juventus no nahatonga ny fitsarana miaro tena eran-tany. Sary: DailyMail.
Ilay tovovavy sakaizan'ny vadin'i Daniele Rugani:
Miakatra ny lazany indrindra amin'ny fahazoana ny eritreritra manerantany amin'ny antony tsy marina, tena nisy tokoa ny fisavana be momba ny mpilalao baolina. Anisan'ireny ny fanontaniany momba ny sakaizan'i Daniele Rugani.
Rehefa avy nanao ny fikarohana izahay dia efa namoahanay fa ilay mpiaro dia manana sipa izay mpamatsy vola ary tsy misy fotoana dia ho vadiny.
Mihaja tsara i Daniele Rugani sy ny sipany. Tsy izy ireo?
Rugani dia fiaraha-miasa am-pitiavana mahafinaritra miaraka amin'ny sakaizany izay lasa fianakavian'i Michela Persico. Ireo fitiavana izay tsy manan-janakalahy na zanakavavy (s) tsy manam-bady - nihaona talohan'ny taona 2016 tamin'ny lalao tennis izay norakofan'i Michela ho mpanao gazety ara-panatanjahantena.
Asides ho mpanao gazety ara-panatanjahantena, Michela dia mpanolotra amin'ny fahitalavitra izay manana hatsarana mahafatifaty ary nampihemotra ny fitadiavan'i Rugani an'ireo sakaiza vaovao. Tahaka ny fitepon'ny fony, dia niatrika fitsapana tsara tamin'ny coronavirus izy saingy ny ankasitrahana dia ankasitrahan'ny duo mety ho faty tsy ho ela.
Ary amin'ny fotoana anoratana, misy ny fanaparitahana vaovao GiveMeSports fa bevohoka sy manambady ny Daniele Rugani ho lasa (Michela Persico) dia efa bevohoka izao na dia efa voan'ny virus aza. Na dia amin'izao fotoan'ny tsy fahatokisana tena izao dia andao isika hiandry azy, Michela Persico, ary ny zaza dia ho salama ary tsy misy otrikaretina.
Fiainan'ny fianakavian'i Daniele Rugani:
Ireo mpiaro tena mahatalanjona dia manana ny fahombiazan'ny dia an-dry zareo amin'ny baolina kitra hamelom-pankasitrahana ny fianakaviana sy ny fianakavian'i Rugani. Amin'ity fizarana ity dia hampahafantarinay anao ny momba ny fianakavian'i Daniele Rugani manomboka amin'ny ray aman-dreniny.
Momba ny Rain'i Daniele Rugani:
Ny dadan'i Rugani, i Ubaldo dia mpankafy an'i Juventus ary koa mpitaingina bisikileta iray izay tompon-daka indroa any Italia amateurs. Izy dia - amin'ny fotoana hanoratana - solontena ny fitaovana fanjonoana ary koa ny dadany akaiky amin'ny zanany lahy izay mahatonga azy hirehareha ho mpankafy Juventus hatrany.
Nahita ity sarin'ny fahazazana an'i Daniele Rugani ity sy ny rainy Ubaldo ve ianao?
Momba ny Renin'i Daniele Rugani:
Mpampianatra any an-tsekoly i Rugani renin'i Rugani izay mitombo ho toy ny mpampianatra azy amin'ny fitondran-tena. Tsy mitsahatra ny manoro hevitra ny mpiaro azy izy mba hifantoka amin'ireo lalao ataony ary hanohitra ireo fomba fiasa ratsy izay fantatry ny mpanao asa soa baolina. Inona koa? mpankafy an'i Juventus izy ary mafana fo amin'izany.
I Daniele Rugani dia nanana fotoana tsara niaraka tamin'i Lia reniny. Sary: Instagram.
Momba ny Rahalahin'i Daniele Rugani:
Daniele Rugani dia manana zokiny lahy iray malaza amin'ny anarana hoe Simeone. Na dia tsy mpilalao baolina kitra aza dia manana fahalianana amin'ny baolina kitra ilay zokiny ary voatana amin'ny fankalazana ny lohatenin'i Rugani dia nandresy tamin'ny tranga maro.
Hihaona amin'ny rahalahin'i Daniele Rugani mankalaza ny iray amin'ny fandresena anaram-boninahitra marobe. Sary: Instagram.
Momba ny havan'i Daniele Rugani:
Lavitry ny fianakavian'i Daniele Rugani, tsy dia fantatra ny momba ny razambeny sy ny fianakaviany. Indrindra satria mifandraika amin'ny raibeny sy renibeny. Toy izany koa, tsy misy firaketana ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, nenitoany ary zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Ny fandrosoana dia miampita ny zana-bola ho an'ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'ny zana-dratsin'ny mpiaro azy.
Fiainam-piainan'i Daniele Rugani:
Fantatrao ve fa ny Rugani dia manana toetra mitovy amin'ny toetran'ny olona izay manana sonia ny zodiaka? Malemy fanahy izy, tsara tarehy, modely, mazoto, mahay mankasitraka ary misokatra manambara zava-misy momba ny fiainany manokana sy manokana.
Ny hetsika izay ataon'i Rugani ho tombotsoany sy ny fialamboliny dia ny fitsangatsanganana, ny jono, ny filalaovana tennis, ny fihainoana mozika, ny filokana, ny fitsangatsanganana, ny filomanosana ary ny fandaniany fotoana tsara amin'ny fianakaviany sy ny namany.
Matoky izahay na nahazo trondro lanja lehibe tokoa izy. Na izany aza, tsy misalasala isika momba ny fahafahany misambotra lavitra kely. Sary: Instagram.
Ny Fiainan'i Daniele Rugani:
Amin'ity fizarana ity dia holazainay aminao ny fomba anamboaran'ny mpiaro sy handaniany ny volany. Ny marina dia, tamin'ny fotoana nanoratany ny Biography of Daniele Rugani, dia manana $ 39 tapitrisa mahery izy.
Avy amin'ny karama sy karama azony amin'ny alàlan'ny karama ambony sy ny karama azony amin'ny alàlan'ny filalaovana baolina ambony amin'ny zotram-piaramanidina ny alàlan'ny fahazoan-dàlana. Amin'ireo vola ireo, afaka mivelona amin'ny fomba fiainana miroborobo amin'ny mpanao sivana tena filalaovana baolina kitra i Rugani izay tsy misy olana mandany vola be amin'ny fananana toy ny fiara sy trano.
Na dia eo aza ny lanjan'ny harenany sy ny lanjan'ny tsena, dia misafidy ny hanana fiainana tsotsotra ny mpiaro satria mbola hita izy fa mitondra fiara amin'ny endriny. Ankoatr'izay dia tsy mbola fantatra ny vidin'ny trano izay ipetrahany miaraka amin'ny sakaizany.
Mora kokoa ny mahita an'i Daniele Rugani sy ny fofombadiny misitraka mitaingina bisikileta fa tsy amin'ny fiara tena izy. Sary: Instagram.
Zava-misy tsy fantatra:
Mba hamonosana ny tantaram-piainan'ny fahazazan'i Daniele Rugani sy ny tantaram-piainanay, eto dia tsy fantatra na tsy fantatra momba ny mpiaro azy.
zava-misy #1: Fiatoana amin'ny Salary an'i Daniele Rugani:
Tamin'ny 30 martsa 2019 dia nanitatra ny fifanarahany tamin'i Juventus i Rugani, ary nitazona azy tany amin'ny klioba hatramin'ny jona 2023. Ity fifanarahana vaovao ity dia nitombo ny tombom-bolany, hira izay nahitany azy mandoa karama mampihena manodidina € 3.1 tapitrisa isan-taona. Manaraka ny karaman'i Daniele Rugani ho isa kely kokoa izahay dia manana ireto manaraka ireto.
Ny Hareny amin'ny Pound Sterlings (£)
Izay azony aloa isan-taona € 3,172,000 £ 2,863,459 $3,407,235
Izay azony amam-bolana € 264,333 £ 238,621 $283,936
Izay azony alohan'ny herinandro € 61,000 £ 59,655 $ 70,984
Izay azony amina isan'andro € 8,714 £ 8,522 $10,140
Izay azony alohan'ny ora € 363 £ 355 $422.52
Izay azony amina Minitra € 6.05 £ 5.91 $7.04
Izay azony amina segondra € 0.10 £ 0.09 $0.11
Be io Daniele Rugani nahazo tombony hatramin'ny nanombohanao ity pejy ity.
Raha ny vakiteny hitanao eo ambony (0) dia midika hoe mijery pejy AMP ianao. ankehitriny Tsindrio ETO mba hijerena ny fiakaran'ny karamany amin'ny segondra.
Fantatrao ve?… Ny mpiasa antonony any Italia dia mila miasa farafaharatsiny 5.9 taona hahazoana € 264,333 izay ny vola nalain'i Daniele Rugani tao anatin'ny iray volana.
Zava-misy # 2: Daniele Rugani Fifa Rating:
Ny mpiaro dia manana salan'isa tsara amin'ny ankapobeny an'ny FIFA amin'ny 82. Ny mari-pahaizana izay fampiatoana ny hery sy ny fahaizan'i Rugani dia manambara ny halavan'ny mpiaro azy na dia mbola mahavita manatratra ny isa mety ho azony aza izy.
Moa ve izy nihalehibe tamin'ny alika mitovy aminy? Credits sary: ​​Instagram.
Tattoos: Rugani dia manao tombokavatsa amin'ny fotoana nanoratana ary mety tsy manana ny tazan'ny vatana mandritra ny sisa amin'ny asany. Amin'ny maha mpiaro azy, izy dia manao laharam-pahamehana kokoa amin'ny fananganana vatany lehibe - mifanandrify amin'ny haavony 6 tongotra 3 santimetatra - noho ny fanatsarana vatana.
Fahamarinana bebe kokoa:
Daniele Rugani Fitiavana amin'ny biby kely hatramin'ny fahazazany:
Rugani dia tena lehibe tamin'ny alika manokana indrindra ny alika hatramin'ny fahazazany mandraka ankehitriny. Azo jerena etsy ambany izy manana fotoana mahafinaritra amin'ny biby fiompy izay heveriny ho namany akaiky.
Ny Fivavahan'i Daniele Rugani:
Ny ray aman-drenin'i Daniele Rugani dia mety namporisika azy hanaraka ny fivavahan'ny finoana kristiana katolika. Fantatrao ve?… Ny anarana hoe "Daniele" dia anarana kristiana hebreo izay midika hoe "Andriamanitra no Mpitsara ahy". Rehefa fantatsika izany, ny voka-dratsy dia manome vahana ny fianakavian'i Daniele Rugani satria Kristiana.
Zava-misy i Trivia Daniele Rugani:
Fantatrao ve fa ny taona 1994 dia tsy manan-danja ho an'ny taona nahaterahan'i Rugani ihany? Taona izay nanombohan'ny PlayStation ny fampiononana voalohany azy. Ankoatr'izay, ny 1994 dia nahita ny famoahana ireo sarimihetsika mahazatra amin'ny haino aman-jery mahazatra toa an'i Forrest Gump. Ary koa, ny sarimihetsika Shawshank Redemption sy ny Disney's Lion King dia nandona sinema tamin'io taona io.
Jereo ny zava-nitranga lehibe izay nahaliana ny taona nahaterahan'i Daniele Rugani (1994). Credits sary: ​​NME.
Wiki wiki Daniele Rugani:
Farany, amin'ny Biography Faces i Daniele Rugani, omenay anao ny knowledgebase wiki anao. Ny latabatra etsy ambany dia hanampy anao hahita vaovao momba azy amin'ny fomba fohy sy mora.
Daniele Rugani tantaran'ny tantaram-piainana
Anarana feno: Daniele Rugani.
anaram-bositra: Daje Dani.
Daty sy taona: 29 Jolay 1994 (25 taona raha tamin'ny 2020 martsa).
Toerana nahaterahana: Lucca, Italia.
Ray aman-dreny: Ubaldo Rugani (Ray) sy i Lia Rugani (Neny).
mpiray tam-po: Simeone Rugani (Zandry taloha).
sipany: Michela Persico (Fitia sy vady ho).
hahavony: 1.90 m (6 p. 3 in).
asa: Mpilalao Football (ivony ivoho).
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny anay Tantara momba ny fahazazan'ny zaza zaza ao Daniele Rugani miampy Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.
Ny tantaran'ny Medi Benatia Childhood Story Plus dia nambara fa marina
Miralem Pjanic Story Child Plus Plus Taken Biography Facts
Ny tantaran'i Mario Mandzukic Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Ny tantaran'i Juan Cuadrado momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa